Tom's rustic, indlu yabucala ephambi kwechibi - I-Airbnb
Tom's rustic, indlu yabucala ephambi kwechibi
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguTom
Fumana uxolo lokugqibela kunye nokuphumla kule ndlu ingamanzi kwichibi laseSerran. Ukuzola kakhulu kunye nesetingi yabucala enembono entle yechibi kunye nonxweme oluhle olunokufikelela ngokulula kokuqubha, ukukhwela isikhephe okanye ukuloba.
Ibekwe ngokufanelekileyo entliziyweni yeNtili yaseMadawaska ejikelezwe ngamachibi anqabileyo kunye namahlathi kwaye ngaphakathi kokuqhuba ngokulula ukuya kwiidolophu ezinqabileyo zaseCombermere, iBarry's Bay kunye neWilno.
Yonwabela ubumfihlo obugqwesileyo kule ndawo i-1 yehektare enommelwane omnye odibanayo, idokhi yabucala kunye nolwandle, isikhephe esinamaphini okubheqa kunye neebhatyi zobomi, umgodi omkhulu womlilo (ubonelelo lweenkuni olulinganiselwe lubonelelwa simahla), umgca we-zip (omaxesha athile), ipropane BBQ ( propane inikezelwe) kunye nokunye.
Awusoze ukruquke apha ngemisebenzi emininzi yayo yonke iminyaka kubandakanya ukuloba, ukukhwela isikhephe, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile, igalufa, ukubona indawo, ii-ATVs, iminyhadala yenkcubeko, iminyhadala, iimyuziyam, nokunye. Ngexesha lasebusika, ukuloba i-ice, i-snowmobiling, i-snowshoeing kunye ne-skiing-cross-country skiing zithandwa ngeendlela ezininzi ezifumaneka kwindawo.
I-cottage ibekwe kwindawo yangasese. Kukho ummelwane omnye odibanayo onezindlu ezi-4 zizonke kwindlela efileyo.
Ichibi leSerran alinamoto. Lichibi eliphakathi kunye nokuloba okundilisekileyo nokuba kuphuma enqanaweni okanye ekunene ngaphandle kwedokhi. Uya kubona amaphenyane, iikayak kunye neenqanawa zokuhamba ngeeseyile zidlula ngaphandle kwengxolo okanye ungcoliseko lwezikhitshane ezinkulu zeemoto.
Iindawo ezingqongileyo zezolonwabo kwindalo - amachibi, amalwandle (aliqela anofikelelo lukawonke-wonke), amahlathi anemizila, iindawo ezinomtsalane (zombini zenkcubeko nangaphandle/ukubona) kunye nokhenketho lokukhenketha (ukukhwela inqanawa, ukukhwela amaphenyane, i-ATV-ing, ukuhamba ngekhephu, njl.njl.)
Umamkeli usoloko efumaneka ngefowuni, ngetekisi okanye nge-imeyile ukuphendula imibuzo yeendwendwe kunye neenkxalabo phambi okanye ngexesha lokuhlala kwazo.